नयाँ करार — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
म जीवित लागि संगीत गर्न. र तपाईं को रूप मा धेरै पनि थाहा, म संगीतको प्रकारको एक CHBC सेवा मा तपाईं सुन्न सक्छ गीतहरू भन्दा अलि फरक छ. त्यहाँ यो संगीत को अन्य विधाहरू भन्दा फरक बनाउन हिप हप बारेमा धेरै कुराहरू छन्. हिप हप गर्न भन्ने अनुपम एउटा कुरा, तर छ र साधारण को रिमिक्स छ.
के सामान्यतया रिमिक्स संग हुन्छ तपाईं पहिले नै बनाएको गीत लिन छ र तपाईं यसलाई Remix. तपाईंले मौलिक केही तत्व राख्न, तर तपाईं पनि यो एउटा नयाँ स्पिन राख्न केही कुराहरू परिवर्तन. त्यसैले तपाईं नयाँ गीत थप्न सक्छ, वा पूरै नयाँ बिट, वा बस नै कुरा गर्न एक फरक दृष्टिकोण. तर लक्ष्य को एक श्रोता केही नयाँ दिन र पनि गीत मा सुधार छ.
साथै नयाँ करार, जो आज राती बारेमा हाम्रो पाठ वार्ता, लगभग रिमिक्स जस्तै छ. म परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई एउटा नयाँ करार गर्न प्रतिज्ञा किनभने भन्न, तर यो बारेमा सबै कुरा छैन नयाँ छ. आफ्नो चरित्र परिवर्तन भएको छैन, आफ्ना प्रतिज्ञाहरू परिवर्तन भएन, उहाँको समग्र उद्देश्य परिवर्तन भएन. तर पूर्ण रूपमा फरक छन् यो करार बारेमा केही कुराहरू छन्. किनभने हाम्रो पापको, पुरानो करार काम गरेन. त्यसैले, परमेश्वरको एउटा नयाँ यसमा सुधार. यो उहाँको योजना बी थिएन, तर उहाँले आफ्नो छोरालाई ल्याउन भनेर एउटा नयाँ करार गर्न सबै साथ योजना. र हामीले यर्मिया यो नयाँ करार पढ्ने 31.
हामी पाठ पढ्न अघि मलाई केही पृष्ठभूमि दिन गरौं.
प्रस्थान मा, परमेश्वरको मान्छे थिचोमिचो पछि गरिएका र मिश्रीहरूले दास, तिनीहरूले छुटकारा लागि उहाँलाई पुकारा. अनि उहाँले दस विपत्तिहरूका संग नाटकीय फेशन र फिरऊनको हृदय खोल्दै तिनीहरूलाई उद्धार, र लाल समुद्र विभाजन. परमेश्वरको इस्राएलका मानिसहरूलाई वितरण गरेपछि, उहाँले तिनीहरूलाई एउटा करारमा बनाउँछ. उस्ले भन्यो, "अब, तपाईं साँच्चै मेरो आवाज पालन र मेरो करार पालन भने, तपाईं सबै मानिसहरूका बीचमा मेरो अनमोल सम्पत्ति हुनेछ…" (प्रस्थान 19:5). उनी आफ्नो तर्फबाट गरेका के तिनीहरूलाई सम्झना. उहाँले तिनीहरूलाई दिन्छ 10 तिनीहरूले पालन गर्ने हो कि आज्ञा. परमेश्वरको तिनीहरूले उहाँलाई पालन यदि तिनीहरूलाई आशीर्वाद प्रतिज्ञा, तिनीहरूले उहाँलाई भङ्ग भने र तिनीहरूलाई श्राप. र मान्छे यो करार गर्न सहमत र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने शपथ खानु.
ठूलो सही ध्वनि? बस उहाँले के भन्छ र सबै ठीक हुनेछ के. तिनीहरूले परमेश्वरको अनमोल सम्पत्ति हुनेछु, उहाँले तिनीहरूलाई आशीर्वाद छौँ, र तिनीहरूले खुसीसाथ कहिल्यै पछि बाँच्न छौँ. समस्या तिनीहरूले उहाँलाई पालन गरेनन् छ. तिनीहरूले सम्झौता आफ्नो पक्षमा राख्न थिएन. र त हामी आफूलाई यर्मियाको समयमा पाउन.
यर्मियाको पुस्तकका न्याय बारेमा मुख्यतया एक पुस्तक हो. पुस्तकको सबैभन्दा तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले लागि उहाँको अगमवक्ता यर्मियामार्फत मानिसहरूलाई हप्काउनु परमेश्वर हुनुहुन्छ, र आफ्नो विनाश बारेमा अगमवाणी. तर त्यहाँ एउटा सानो खण्ड छ (30-33), जहाँ हाम्रो पाठ आज पाइन्छ, जसमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई उहाँको प्रतिबद्धता तिनीहरूलाई आश्वासन, आफ्नो विद्रोह बावजुद, र उहाँले तिनीहरूलाई बाहिर खन्याउन हुनेछ आशीर्वाद अगमवाणी. पछि एक दिन यो विनाशको सबै, उहाँले तिनीहरूलाई बहाल रहेको छ. उहाँले यो नयाँ करारको तिनीहरूलाई यसो भन्छन् उहाँले गइरहेको तिनीहरूलाई बनाउन. र आज हामी सोच्न जाँदै हुनुहुन्छ के. त्यहाँ धेरै छन्, हामी नयाँ करार बारेमा भन्न सक्ने धेरै कुराहरू, तर हामी यो बिहान ध्यान केन्द्रित गर्न एक पद जाँदै हुनुहुन्छ.
उहाँले के भन्छ सुन्नुहोस्.
"यो म इस्राएलका घर संग समय पछि गर्नेछ करार छ,"प्रभु घोषणा. "म आफ्नो mindsand मेरो व्यवस्था गर्नेछन् यसलाई आफ्नो हृदय मा लेख्न.
म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु,र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। " (यर्मिया 31:33)
म सिर्फ हामी धन्यवादी हुनुपर्छ चार कुराहरू र यो पाठ हामी प्रतिबिम्बित रूपमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ.
म. परमेश्वरको अन्तर्राष्ट्रीय काम गरिरहेको छ
पाठ भन्छन्, "यो म इस्राएलका घर बनाउन हुनेछ करार छ…" राष्ट्रिय कुरा जस्तै लाग्दछ सही? त्यसैले कसरी नयाँ करार परमेश्वरले अन्तर्राष्ट्रीय काम गरिरहेको छ कि यो छ?
प्रस्थान परमेश्वरको राम्ररी उहाँको मान्छे इस्राएलका एउटा करारमा गरे. र यर्मियाको पुस्तक को प्रसंगमा, यो नयाँ करार पनि इस्राएल राष्ट्रलाई गरे भइरहेको छ. त्यहाँ परमेश्वरको इस्राएल बाहिर एक काम गर्ने योजना बनाए केही स्पष्ट छनकहरू छन्, तर समयमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा सीधा इस्राएल राष्ट्रलाई तिनीहरूलाई पुनस्थापित बारेमा गरिरहेको छ.
अनि येशूले धरती आउँदा, उहाँको ध्यान यहूदीहरूले मा स्पष्ट छ. मत्ती मा 15:24, येशू भन्नुहुन्छ, "म इस्राएलका घर हराएको भेडालाई मात्र पठाइएको थियो।" तर को पाठ्यक्रम इस्राएलका मानिसहरूले उहाँलाई अस्वीकार र मत्ती सुसमाचारको को अन्त द्वारा, उनको योजना स्पष्ट छ. उहाँले "चेला बनाउन भन्छन्,"केवल इस्राएलका, सबै जातिका तर.
अनि हामी प्रेरित यति स्पष्ट देख्न र नयाँ करारका सबै, बचत पापी परमेश्वरको काम विस्तार गरिएको छ कि. उहाँले पनि सबैभन्दा असम्भाव्य प्रेरित पठाउँछ, पावलले, अन्यजातिहरूको गर्न विशेष गर्न. उहाँको ध्यान राष्ट्रिय मानिसहरूलाई अब छ, तर एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्छे मा.
अनि हामी यो परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ! कसैले सुरक्षित र परमेश्वरको पुनःस्थापित गर्न योग्य, त्यसैले उहाँले इस्राएलका मानिसहरूलाई उद्धार गर्न दयालु थियो. र उहाँले हामीलाई सबै मुक्ति भेटी द्वारा दयालु हुनु जारी. यो तिर्खा को लगभग मान्छे जस्तै मरिरहेका छन् छ, र केवल एक व्यक्ति पानी छ. र पानी मात्र छोराछोरी उपलब्ध थियो जस्तै यो पहिलो देख्यो. तर त्यसपछि हामी पानी हामी सबै उपलब्ध छ पत्ता. यो छोराछोरीलाई सुरक्षित गर्न सकिएन भनेर ठूलो थियो, तर अब हामी सबै फेला पार्न सक्नुहुन्छ. यो दृष्टान्त छोटो घोप्टो मुख्य तरिका हामी तिर्खा को मर्न योग्य छ. तर परमेश्वरले graciously हामी चाहिने मुक्तिको हामी सबै प्रदान गर्दछ.
म यसलाई सफा छ लाग्छ म यहूदी वंश को छैन. हामीलाई केही यहाँ राती छन्. म यसलाई यहाँ हामी सबै भन्दा यहूदी छैनन् भन्न सुरक्षित लाग्छ. यो हामीलाई केही विशेष गरी प्रशंसनीय हुनुपर्छ त्यसैले. परमेश्वरको साथै हामीलाई उहाँको आँखा सेट थियो र उहाँले हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट पठाएको भनेर. एफिसी2भन्छन्, "यसैले शरीरमा तपाईं अन्यजातिहरू भनी सम्झना एक समयमा… ख्रीष्टको अलग त्यतिबेला तपाईं थिए सम्झना, प्रतिज्ञा को करार इस्राएलका र अपरिचित राष्ट्रमंडल तर्किएको, संसारमा कुनै आशा र परमेश्वरको बिना भइरहेको. तर अब ख्रीष्ट येशूमा तपाईं जो एक पटक सम्म बन्द नजिकै ख्रीष्टको रगत द्वारा ल्याए गरिएको छ। थिए " (एफिसी 2:11-13 ESV)
उहाँले हामीलाई टाढा बन्द छोड्न गर्नुभएको परमेश्वरको प्रशंसा, utterly निराशजनक, र उहाँलाई बिना. उहाँले यो गर्न छैन, तर हामीलाई थाहा छ रूपमा यो उहाँको योजना सबै साथ थियो. अनि हामी जहाँ कथा समाप्त थाहा. कथा सबै जातिका मानिसहरू र अन्य भाषामा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी मा सँगै पाठो पूजा समाप्त हुन्छ. किनभने "द्वारा [आफ्नो] रगत [उहाँले] हरेक कुल, भाषा र मानिसहरूलाई परमेश्वरले लागि ransomed मान्छे र राष्ट्र " (प्रका 5:9).
त्यसैले यो हामी अहिले पनि ख्रीष्टको शरीरको रूपमा मिलेर बस्न बाटो असर पर्छ. परमेश्वरको रूपमा, हामी बन्द एक विविध मान्छे सुरक्षित गर्न परमेश्वरको योजना देखाउँछ तरिकामा सँगै जीवन के गर्न प्रयास गर्नुपर्छ. कहिलेकाहीं मेरो चर्च आइतबार बिहान मा बप्तिस्मा गर्छ. र म त्यहाँ हेर्न र विविध मान्छे करार दिने हेर्न प्रेम. उनीहरू सबै विभिन्न पृष्ठभूमिका छ, तर परमेश्वरको सुरक्षित अनुग्रह ती सबै मा उपस्थित थियो. त्यो यहाँ आज हामी भने हुन सकेन. म प्रार्थना मानिसहरूले हाम्रो चर्च बीचमा आउन गर्दा, तिनीहरूले मानिसहरूलाई धेरै विभिन्न प्रकार को जीवनमा परमेश्वरको काममा MARVEL थियो. तपाईंले आफ्नो उमेर वा दौड द्वारा सुरक्षित हुनुहुन्छ. त्यहाँ खाँचोमा परेका रहेको अन्य कुनै योग्यता छ. र हामी सबै खाँचोमा परेका छन्.
म पूरा मान्छे को एक धेरै यो थाहा छैन. तिनीहरूले लाग्छ परमेश्वरले मात्र मान्छे को दुई प्रकारका बचत: पुरानो सफेद दोस्तों वा पुरानो कालो हजुरआमा त. तर यो साँचो हो, ठिक? धर्मशास्त्र भनेर स्पष्ट छ "सबैले गर्ने सुरक्षित गरिनेछ प्रभुको नाउँमा भनिएको छ।" केवल धनी मान्छे, वा गरिब, पुरानो मान्छे वा जवान मानिसहरू वा, यहूदी मानिसहरू वा वा सेतो मान्छे वा कालो मान्छे. कुनै, परमेश्वरले सबै उहाँको प्रस्ताव विस्तार गरेको छ.
हामी, एक चर्च रूपमा, परमेश्वरको मात्र व्यक्ति को एक निश्चित प्रकारको बचत जस्तै यो जस्तो बनाउँछ भन्ने केहि पनि गरिरहेको डर हुनुपर्छ. त्यो नयाँ करारको सुन्दर रहस्य छ. परमेश्वरको कुनै पनि पापी सुरक्षित भनेर सुसमाचारको को Glòries को एक हो ख्रीष्टको विश्वास राख्दछ जो. यो केन्द्रित वा सीमित होइन कुनै पनि एक समूह.
एक चर्च रूपमा, हामी एउटै ठाउँमा देखि सबै आउन सक्छन् र हामी त्यही जातीय पृष्ठभूमि नहुन सक्छ, तर हामी केही सामान्य ठूलो छ. हामी ख्रीष्ट मार्फत जीवित संग करार हो. अनि त्यो विशाल छ.
यो पनि कारण छ हामी मिसनरीहरूलाई पठाउन र तिनीहरूलाई लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ! किन हामीलाई केही हाम्रो बैग पैक र जान आवश्यक यो छ! परमेश्वरको नयाँ करार बनाएको छ किनभने, र उहाँले राष्ट्रका समावेश गर्नुपर्छ. कसैले हामीलाई भन्नुभयो र कसैले बताउन जान आवश्यक छ.
हुनत त्यसैले इस्राएलको घर परमेश्वरको करार बारेमा पाठ वार्ता, हामी आफ्नो योजना विस्तार भएको थियो भनेर थाहा. गरेको अन्तर्राष्ट्रीय काम लागि परमेश्वरको प्रशंसा गरौं. के ठीक जस्तै काम खोज्दैन? के यो करार अन्य तरिकामा नयाँ हुनेछ?
द्वितीय. परमेश्वरको आंतरिक काम गरिरहेको छ
"म आफ्नो मन मेरो व्यवस्था राख्न र तिनीहरूको हृदय मा लेखन हुनेछ।"
मलाई लाग्छ छैन पाठ हृदय र मन बीचको यहाँ केही विशाल फरक आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेको छ. म यो सिर्फ दुई फरक शब्द प्रयोग गरेर परमेश्वरले हामीलाई भित्र केहि भनेर सञ्चार लाग्छ. अन्य अनुवाद भन्न "म तिनीहरूलाई भित्र मेरो व्यवस्था राख्नु र म तिनीहरूको हृदय मा लेख्न हुनेछ।"
अब को पाठ्यक्रम पहिलो पटक परमेश्वरले तिनीहरूलाई व्यवस्था दिनुभयो, उहाँले ढुङ्गाको पाटीमा यो यस्तो लेखे. तर परमेश्वरले भन्दै छ, "कुनै, वरिपरि यो समय म तिनीहरूको हृदय मा लेख्न जाँदै छु। "पहिलो पटक परमेश्वरले तिनीहरूलाई व्यवस्था दिनुभयो, उहाँले तिनीहरूको अगाडि राखेँ. तर परमेश्वरले भन्दै छ, "कुनै, वरिपरि यस समय, म तिनीहरूलाई भित्र मेरो व्यवस्था राख्न जाँदै छु। "
हामी न्यानो रूपमा हृदयका सोचाइ accustomed हुनुहुन्छ, भित्र अस्पष्ट स्थान. हामी सम्बन्ध संग हृदय र प्रणय दिवस र रोमान्टिक प्रेम सम्बद्ध. तर, biblically हृदय धेरै बस एक mushy भावनात्मक ठाउँ भन्दा बढी छ. धर्मशास्त्रमा, हृदय हाम्रो सम्पूर्ण भित्री मानिस छ. यसले हाम्रा भावनाहरू समावेश, तर यो पनि हाम्रो मन समावेश, हाम्रो इच्छा, र हाम्रो चाहना - सबै कि भित्र हुन्छ. हिब्रू शब्द वास्तवमा bowels अर्थ, किनभने तिनीहरूले प्रयोग तस्वीरको. हामी शब्द हृदय प्रयोग.
हृदय हामीले सबै को कोर छ. यो हाम्रो कार्यहरू निर्देशन कि जीपीएस सिस्टम जस्तै छ. समस्या यो भङ्ग गर्नुपर्छ छ. हाम्रो पापी हृदय गलत लाग्छ, र गलत महसुस, र गलत इच्छा. अनि हामी परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन, किनभने हामी जो को कोर मा, हामी गलत हुनुहुन्छ.
कुनै कुरा के मैले गरे म पल्ट लिफ्ट सकेन. र कुनै कुरा कुनै पनि पापी गर्छ के, तिनीहरू केवल परमेश्वरको व्यवस्था पूर्ण राख्न बल अप बटुल्न गर्न सक्षम हुनुहुन्छ.
र यो परमेश्वरको किन व्यवस्था छ, रूपमा सिद्ध यो थियो, हामीलाई कहिल्यै बचत. किन बस हामीलाई के गर्न पर्याप्त हुन कहिल्यै सकेन सही कुरा बताउन यो.
यो आज जस्तै देखिन्छ, जीवित अनैतिक जीवन पक्षमा मा तर्कको धेरै प्राकृतिक के संग के छ. तिनीहरूले सही हुनुपर्छ त्यसैले हामी केही इच्छाहरूले जन्म थिए. कसरी
परमेश्वर कहिल्यै यति सही महसुस कुरा एउटा समस्या छ, हुन कि कि विवाहपूर्व यौनसम्बन्ध राख्नदेखि, वा समलिङ्गीहरूले, वा कुनै पनि नैतिक मुद्दाहरू.
सत्य हाम्रो मन त टुटेको र भ्रमित हो, त्यो गलत सही महसुस र सही र गलत महसुस. हाम्रो spouses हामीलाई रीस उठाउनु जब तिनीहरूलाई अनादर गर्न क्षणमा दायाँ महसुस. म foul संगीत भिडियो हेर्न माथि बढ्दै थियो जब, यसलाई सही कामुकतालाई गर्न स्क्रिनमा ती महिला पछि लाग्यो. जब हाम्रो आय छैन एकदम सही छ यो हाम्रो कर मा अलिकति बिट धोखा सही महसुस. हाम्रो मन हामीलाई झुक्याउन. यर्मियाको पुस्तक अर्को ठाउँमा वास्तवमा, यो भन्छन्, "हृदय सबै कुराहरू माथि छली छ, र नितान्त बिरामी; जसले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ?" (यर्मिया 17:9 ESV)
यो व्यवस्था गर्न पर्याप्त थिएन, किनभने हाम्रो पापी हृदय मात्र विद्रोह मा प्रतिक्रिया. परमेश्वरले हामीलाई खोल्न थियो, र हामीलाई आध्यात्मिक हृदय प्रत्यारोपण दिन.
यो आन्तरिक काम यो नयाँ करारको कोर मा छ र हामी यसको लागि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ. परमेश्वरले हामीलाई भित्र काम गर्न प्रतिबद्ध गर्नुभएन भने हामी अझै पनि निराशजनक हुनेछ. फिलिप्पी2हामीलाई यसो भन्छ, "डर र कामेको आफ्नो मुक्तिको बाहिर काम…" किन? "यसको लागि तपाईंलाई काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, दुवै हुनेछ र आफ्नो असल खुशी लागि काम गर्न। " (फिलिप्पी 2:12-13 ESV)
यो छ किनभने आफ्नो काम को हामी भित्र हामी हाम्रो मुक्तिको बाहिर काम गर्नेछ भन्ने. हामी केवल परमेश्वरको इच्छा गर्न र के उहाँले हामीलाई भनिन्छ गर्नुपर्छ के हाम्रो मन मा आंतरिक काम गरिरहेको छ किनभने बाह्य काम गर्न सक्छन्. परमेश्वरले initiator र यहाँ enabler छ. हामी अचम्मको काम परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ.
त्यसैले यो सत्य को प्रकाश मा, भनेर ठ्याक्कै छ हामी गरिरहेका कस्तो हुनुपर्छ. हामी हाम्रो मुक्तिको काम गर्नुपर्छ. हामी पाप विरुद्ध हाम्रो लडाई मा विश्वस्त हुनुपर्छ, परमेश्वरले हामीलाई भित्र काम छ भनेर थाह पाउँदा. परमेश्वरले आकाश मा बस उहाँको मान्छे मा आदेशहरू बाहिर भौंक बसिरहेका छैन र जब उनि असफल तिनीहरूलाई आलोचना. हामीलाई विश्वास मदत र पालन गर्न उहाँले वास्तवमा हाम्रो हृदयमा काम गर्नुपर्छ. हामी परमेश्वरको अल्छी धंधा लागि कुनै बहाना छ.
तपाईंले केही पाप संग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ शायद आज जस्तै तपाईं पराजित गर्न सक्दैन तपाईं महसुस कि.
प्रोत्साहन गर्न. परमेश्वरले तपाईंलाई भित्र काम छ. अनि उहाँले कुनै पनि पाप भन्दा बलियो छ.
मेरो आफ्नै जीवनमा, म त स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ. म अब सङ्घर्ष कि छैन छैन, तर यो यति फरक छ. म मेरो पाप प्रेम हुनुको सम्झना. र त्यसपछि म कहाँ यो मलाई पाऱ्यो परिवर्तन सम्झना. म मेरो व्यवहार परिवर्तन सुरु पनि अघि, बाटो म महसुस भनेर मैले देखे, र कसरी मलाई लाग्यो, र के म परिवर्तन भएको थियो इच्छित. त्यो मात्र परमेश्वरको आन्तरिक काम हुन सक्छ. अनि त्यहाँ केही परमेश्वरको अरूप्रति त्यसो हेर्दै भन्दा sweeter छ. म आनन्दित र भन्न सकिन्छ, "अरे, उनी पनि मलाई गरे!"
यो केवल मसीहीहरूले शेयर ख्याल कि एकता एउटा अनुपम प्रकारको छ. परमेश्वरले हामीलाई भित्र काम छ.
हामी उहाँको आन्तरिक कामको लागि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ.
III. परमेश्वरको Interpersonally काम गरिरहेको छ
यस पदको अन्तिम भाग सुन्न. परमेश्वरको भन्छन्,
"म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु,र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। "
परमेश्वरको गरिरहेको छ कि करार एक मात्र सम्झौता छैन. यो उहाँलाई तिनीहरूलाई लागि असल कामहरू गर्न लागि केही सम्झौता छैन. यो करार आफ्ना मानिसहरूलाई व्यक्तिगत सम्बन्ध मा आधारित छ. परमेश्वरको बस कुराहरू हामीलाई आशीर्वाद प्रतिज्ञा छैन, उहाँले आफूलाई हामीलाई आशीर्वाद प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ. उहाँले हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ. यो नयाँ अपार्टमेन्ट लागि एक पट्टा हस्ताक्षर रुचि होइन. जब तपाईं त्यसो, तपाईं बस तिर्न आफ्नो घर धनी प्रत्येक महिना भाडामा प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुनुहुन्छ. यो जस्तो होइन. त्यहाँ व्यक्तिगत छ, उहाँको मान्छे तिर उहाँको कार्यहरू मा प्रतिबद्ध प्रेम र त्यहाँ स्नेह.
र त्यहाँ स्वामित्व को एक निश्चित प्रकारको त्यहाँ. उहाँ आफ्ना पुत्रको रगतले हामीलाई खरिद गर्नुपर्छ र हामी उहाँलाई हौं. यो मलाई सम्झना दिलाउँछ ख्रीष्टको अकेला मा लाइन, "म उहाँको हुँ र उहाँ मेरै हुनुहुन्छ. ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतले किनेको."परमेश्वरले सधैं उहाँको मान्छे व्यक्तिगत सम्बन्ध छ खोजे छ, र यो यो नयाँ करार जारी थियो.
क्रिश्चियन, तपाईं आफ्नो परमेश्वरको रूपमा परमेश्वरको लाग्छ, वा रूपमा केवल परमेश्वरको? जब तपाईं परमेश्वरको लाग्छ उहाँ त्यहाँ केवल सृष्टिकर्ता छ? वा उहाँले आफ्नो पिता छ? उहाँले आफ्नो प्राण को प्रेमी छ?
तपाईंले उहाँलाई हेर्ने तरिका तपाईंले उहाँलाई प्रतिक्रिया बाटो परिवर्तन किनभने. उहाँले तिनीहरूका परमेश्वर थियो भने इस्राएलका मानिसहरू जीवित थिएनन्. तिनीहरूले मूर्तिपूजा थिए. तिनीहरूले उहाँको वचन भरोसा छैन. आफ्नो जीवन शैली बारेमा केही यो परमेश्वरले बताए. र आफ्नो जीवनको बारेमा केही तिनीहरूले उहाँको मान्छे थिए भने.
ख्रीष्टमा भरोसा छ जसले हामीलाई ती उहाँको मानिसहरू हुन्. परमेश्वरले हामीलाई उहाँको नाम stamped छ. सबै उहाँलाई पर्छ, तर एक विशेष तरिकामा उहाँले हामीलाई देख्यो र भन्यो छ, "तिनीहरूले मेरो हो।" अनि हाम्रो जीवनमा यो सत्य साक्षी गर्नुपर्छ.
येशूले हाम्रो पूजाहारी रूपमा पार गर्न जाँदा, उहाँले यूनिभर्स परमेश्वर हामीलाई पहुँच दिनुभयो. म हामी उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सत्य grasped यदि यो हाम्रो प्रार्थना जीवन परिवर्तन हुनेछ कसरी आश्चर्य र हामी उहाँको मानिसहरू हुन्. म आफ्ना मानिसहरूलाई दासत्वमा परेका थिए जहाँ प्रस्थान सोच्न र पाठ भन्छन्, मसीही "उहाँले तिनीहरूका पुकारा सुने र आफ्नो पिता उहाँको करार सम्झनुभयो।", परमेश्वरको उहाँले सबै मानिसहरूलाई आफूलाई प्रतिबद्ध छैन तरिकामा हामीलाई आफूलाई प्रतिबद्ध छ. परमेश्वरले तपाईंको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उहाँ सधैं मायालु तरिकामा प्रतिक्रिया हुनेछ. उहाँले आफ्नो परमेश्वर हुनुहुन्छ. के तपाईं उहाँको मान्छे को एक हो.
म हामी उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी सत्य grasped यदि परीक्षण को बीचमा महसुस सान्त्वना थप कति आश्चर्य र हामी उहाँको मानिसहरू हुन्. रोमी 8 केही ख्रीष्टमा परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्छन् भनेर हामीलाई सम्झाउँछ. म दासत्वमा बेचिएको भइरहेको यूसुफ सोच्न, र आफ्ना भाइहरूलाई दुष्ट लागि भनेर के अर्थ भन्दै, परमेश्वरको असल अर्थ. कुनै कुरा को बीचमा हामी परीक्षा कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको मात्र हाम्रो असल र उहाँको महिमा लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेछ. उहाँले आफ्नो परमेश्वर हुनुहुन्छ. के तपाईं उहाँको मान्छे को एक हो.
म मेरो आफ्नै जीवनमा लाग्छ, म यो बुझ्न बेला समय, म ब्राड यो बिहान गर्न हामीलाई भनिन्छ ठ्याक्कै के. बरु, म सत्य गर्न clinging उहाँको, र उहाँले मेरो हो, म एक प्रतिभा देखाउने मा मेरो ख्रीष्टियान जीवन बारी सुरु; म कहाँ परमेश्वरको लागि प्रदर्शन र म राम्रो पर्याप्त प्रदर्शन भने म उहाँको राम्रो गौरव मा बनाउन. तर जब म उहाँले मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सत्य बुझ्न र म उहाँको बच्चा हुँ, म उहाँको अनुग्रहको लागि प्रेमको र कृतज्ञता बाहिर उहाँलाई पालन गर्न चाहनुहुन्छ. म उहाँलाई आफैलाई प्रदर्शन र प्रस्तुत गर्न छैन. परमेश्वरले मेरो पक्षमा छ. म कसले ठट्टा छु? उसले धेरै मेरो पवित्रता ख्याल गर्नुहुन्छ म भन्दा. उहाँले मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ. म उहाँको मान्छे को एक हुँ.
म मा र जान सक्छ. तर यो महत्वपूर्ण छ, हामी यो एक पकड लो कि. उहाँले हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँको मानिसहरू हुन्. र हामी मुक्तिको यो पारस्परिक कामको लागि उहाँलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ.
चतुर्थ. परमेश्वरको काममा छ
म यस खण्डमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वाक्यांश तिमी माथि छोडियो हुन सक्छ दुई सानो शब्द छ लाग्छ, "म गर्नेछु।" परमेश्वरको भन्छन्, परमेश्वरको भन्छन् "म एक नयाँ करार गर्नेछु।", "म तिनीहरूलाई भित्र मेरो व्यवस्था गर्नेछन्।" परमेश्वरले यसो भन्छ, "म तिनीहरूको हृदय मा लेखन हुनेछ।" उहाँ भन्नुहुन्छ, "म तिनीहरूका परमेश्वर हुन र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् हुनेछ।"
भाइबहिनीहरू, यो नयाँ करार अन्ततः तपाईं निर्भर गर्दैन. यो सुरु र परमेश्वरको समाप्त हुन्छ. परमेश्वरको योजना थियो जो छ. परमेश्वरको कृपालु र हामीलाई बाहिर लिएनन् हामी पाप पहिलो पटक गर्ने छ. परमेश्वर आफ्नो छोरालाई पठायो गर्ने थियो. परमेश्वरको ख्रीष्ट उहाँको क्रोध पोखे गर्ने थियो. परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट बिउँताउनुभयो गर्ने छ. परमेश्वरको जसले तपाईंलाई एउटा नयाँ सृष्टि गरेका छ. परमेश्वरको जसले तपाईंलाई उहाँको आत्मा दिनुभएको छ. परमेश्वरको जसले तपाईंलाई नयाँ हृदय दिनुभएको छ. परमेश्वरको जसले तपाईंलाई पवित्र पार्ने गर्नुपर्छ एक छ. परमेश्वरको जसले तपाईंलाई राख्नेछ एक छ. अनि परमेश्वरले जसले तपाईंलाई महिमा हुनेछ छ. यो करार सुरु र परमेश्वरको समाप्त हुन्छ.
परमेश्वरले आफूलाई एक मान्छे को लागि गर्न कटिबद्ध छ. अनि उहाँले त्यो मान्छे आफूलाई प्रतिबद्ध छ.
विश्वासीहरूलाई यस हामीलाई ठूलो सान्त्वना गर्नुपर्छ. हामी पनि हाम्रो अनाज्ञाकारिताले यो करार भङ्ग गर्न सक्दैन भनेर थाहा किनभने. हाम्रा मूर्खता यो करार असफल बनाउन सक्दैन. परमेश्वरको काममा छ किनभने, उहाँले हामीलाई आफूलाई प्रतिबद्ध गर्नुपर्छ, र उहाँले असफल गर्दैन.
यी यो नयाँ करारको भाग सुन्दर आशिष् हो. तर सत्य यी मात्र परमेश्वरको करार भएका ती उपलब्ध आशिष् हो. र हामी जीवन भरोसा गर्दा परमेश्वरको करार प्रवेश, मृत्यु, र उहाँको पुत्रको पुनरुत्थान, जीसस क्राइष्ट. तपाईं ख्रीष्टको थाहा don't भने, आफ्नो पापबाट बारी र आज उहाँलाई विश्वास. बरु उहाँको क्रोध बाहिर घनघोर को, परमेश्वरको सदाको लागि आफ्नो टाउको मा unsearchable धन पोखाउनुहोस् हुनेछ.
तपाईंले याद सक्छ, चित्रित चित्र awfully सिद्ध सुनिन्छ कि. र सत्य हामीले पूरा हुनेछ कुरा नयाँ करार यी पक्षलाई कुनै पनि छ पूर्णतया सम्म हामी उहाँलाई छन्. हामी उहाँसँग हुँदा हामी सिद्ध देख्ने, ख्रीष्टको शुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दुलही. हामी उहाँसँग हुँदा हामी सिद्ध संग एक मान्छे हुनेछ, ख्रीष्ट र उहाँको तरिका सबै प्रेम शुद्ध हृदय. जब हामी उहाँसँग छन्, हामी हाम्रा परमेश्वर संग एक सिद्ध सम्बन्ध हुनेछ र हामी उहाँको रूपमा उहाँलाई महिमा हुनेछ. त्यतिन्जेल हामी थिच्नुहोस् र प्रत्येक दिन उहाँलाई बढी विश्वास गर्ने प्रयास. गरेको प्रार्थना गरौं.